दुवै मृगाैला फेल ! दुनियाका घर बनाउने दाईकाे जीवन कसले बनाउला ? श्रीमतीले तरकारी बेचेर कतिन्जेल उपचार होला - Enepalese.com
दुवै मृगाैला फेल ! दुनियाका घर बनाउने दाईकाे जीवन कसले बनाउला ? श्रीमतीले तरकारी बेचेर कतिन्जेल उपचार होला
इनेप्लिज २०७५ मंसिर २१ गते १२:०० मा प्रकाशित
पोखरा ९ श्रीकृष्णटोलका डिल्लिराम सार्की केहि समय पहिलासम्म अरुको घर बनाउने ठेक्का लिन्थे । उनले पोखरामा धेरैका घर बनाउन ठेक्का लिएर धेरै महलहरु बनाएका छन् । तर उनलाई केहि समयदेखि स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ । उनका दुवै मृगौलाले काम गर्दैनन् । उनकी एक छोरी कक्षा १२ मा पढ्छीन् । डिल्लीरामकी श्रीमती डोकोमा तरकारी बेच्ने काम गर्छीन् । दिनभर तरकारी बेच्दा मुस्कीलले ६ सय ७ सय रुपैया बचत हुने उनको भनाई रहेको छ ।
त्यहि तरकारी बेचेको रकमले उनको उपचार सम्भव देखिएको छैन । सार्कीको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ । उनले सबैर्लाइ सहयोगको याचना गरेका छन् । हेर्नुहोस यो भिडियो :